ဂဇက်မန်ဘာအချင်းချင်း နုတ်ခွန်းဆက်ကြလေသောအခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂဇက်မန်ဘာအချင်းချင်း နုတ်ခွန်းဆက်ကြလေသောအခါ
Posted by ခင်ခ on May 22, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 19 comments
ရန်ကုန်-မန်း အမြန်လမ်းနှင့်မခြား ခဏခဏ ချော်လဲနေသော ဂဇက်မြို့အ၀င်လမ်းကြီးကိုလည်း တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ပြင်သင့်ပါပြီလေ။
ဘယ်နယ့်ဗျာ အပတ်တိုင်းလိုလို သတင်းတွေမှာ ဘယ်ခရီးသည်ကားတော့ မှောက်ပြန်ပြီ ဟိုကိုယ်ပိုင်ကား ကတော့ လမ်းလည်ကျွန်းတိုက်ကာ တပတ်လည်လို့ ဘာကားကတော့ ရစရာတောင်မရှိဘူး ဖြစ်သွားတာ ဆိုတာတွေကို သတင်းတွေ ဖေ့ဘုတ်တွေမှာ ကြားကြားနေရတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းက သေမင်းတမန်လမ်းလိုဖြစ်နေတဲ့ သတင်းတွေကြားရကာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ ဖေ့ဘုတ်လေးဖွင့်သုံးပြီး ဂဇက်ရွာဖြစ်တည်ကထဲက ရင်းနှီးလာတဲ့ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ပြန်လှန်ပြောဆို နောက်ပြောင်ကာ စိတ်လေးအပန်းဖြေမယ်ကျန်ကာရှိသေးတယ်
” လေးခ ရွာထဲဝင်လို့ရလား ” တစ်ယောက်က စမေးပြီ
” ဦးခ ဒီမနက်ရွာထဲ ၀င်လို့ရလား ” ဟော နောက်တယောက်က မေးလာလို့
” ကိုခ ရွာထဲ ခင်ဗျားဝင်ကြည့်သေးလာ ကျုပ်ကတော့ ၀င်မရဘူး ” ဆိုပြီး ဆရာပေါက်ကတစ်မျိုးမို့
ကဲ ရွာထဲဝင်ကြည့်အုံးမှာဘဲဆိုပြီး ကျုပ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါ
The requested URL /195905 was not found on this server.
Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch Server at myanmargazette.net Port 81
အဲလိုဖြစ်တာ ဒီတစ်ခါဘဲလို့ မပြောလေနဲ့နော် ဂဇက်မန်ဘာတွေလိုက်မေးကြည့် သူလည်း အပတ်တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေလေတော့ ဂဇက်မန်ဘာအချင်းချင်းတွေ့ရင် “ထမင်းစားပြီးပြီလား” “နေကောင်းလား” “အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေလား” “How are you” လို့မမေးကြဘဲ ဂဇက်ရွာမှ ဂဇက်မြို့တည်ပြီးသည့် အချိန်မှ စ၍ ဂဇက်အ၀င် လမ်း သည်လည်း ရန်ကုန်-မန်း အမြန်လမ်းနှင့်မခြား ခဏခဏ ချော်လဲနေသောကြောင့် ဂဇက်မန်ဘာအချင်းချင်း နုတ်ခွန်းဆက်ကြလေသောအခါ “ရွာထဲဝင်လို့ရလား” ဟုဆိုလေသတည်း။
ဒီ နေ့ ဘာ ဂဏန်းရလဲ ထက်စာရင် တော်သေးသလားးး
အနှေးလမ်း…လမ်းကတော့ဖြင့် MPT က ပြင်မှရမယ်…
အော် ဂလိုလား.. ဘာမှမဘူးပါနဲ. ကိုခရယ်.. အခု သဂျီးမင်း အဲဒီလမ်းကြီးကို ကွင်းဆင်းလေ့လာနေပါတယ်… ထပ်တစ်ရာ ခင်းးး အဲလေ.. ကတ္တရာ ခင်းပေးမယ်ဆိုလားပဲ..
သဂျီးက အဲလို ကွင်းဆင်းရင် အမှာတော်ပါးသွားတာက ရွာသူားတွေ တရက် နှစ်ထောင် နဲ. စားလောက်တယ်ဆိုလားပဲဗျ…..ဟေးဟေးဟေး…
ကျနော် wifi နဲ့ သုံးရင် အဆင်ပြေပြီး
ဖုန်း အင်တာနက်လိုင်း တစ်မိနစ် လေးကျပ်နဲ့ ဝင်ရင်
ဖုန်း နက်လိုင်းက မနက်စောစောပိုင်းဆိုရင် good တယ်
နေ့လည် ဆိုရင် အဝိုင်း လည်မဆုံးပြီ
ညနေဆိုရင်တော့ ပေါ်ကိုမလာတော့တာ. . .
အလက်​ဆင်းက ၁မိနစ်​ ၄ကျပ်​ဆို​တော့ CDMA ဖြစ်​ပုံရတယ်​ ။ GSM က လိုင်းပို​ကောင်းတယ်​ဆိုပဲ ။ ရန်​ကုန်​မှာ ​ပြောတာ​လေ ။ ​နေပူ​တော်​မှာလဲ မီးပျက်​ရင်​ CDMA က လိုင်းတန်းကျသကွဲ့ ။။ GSM ​တွေက​တော့ လိုင်း​ကောင်း​နေတာ ၁၀ရက်​ ​ကျော်​ ပီထင်​တယ်​ ။ ဘ​ရောက်​ဇာက​နေ၀င်​တာ ဖွတ်​ကနဲ ဖွတ်​ကနဲ ပဲ ။ ပတ်​စ်​၀တ်​ကိုလဲ မှတ်​ထား​ပေးတာဆို​တော့ ပြန်​ရိုက်​စရာမလိုဘူး ။ ဒါတိုက်​ပဲ ။ စာရှည်​ရှည်​ ဖတ်​ချင်​ရင်​ အင်​တာနက်​​လေး ခဏ ပိတ်​ ပြီးမှ ပြန်​ဖွင့်​ ။ အဆင်​ကို​ပြေလို့ ။ ​ဖေ့စ်​ဘွဆ်​က​နေတာ့ အပလီ​ကေးရှင်းနဲ့ အဆင်​မ​ပြေဘူး ။ ဘ​ရောက်​ဇာက ၀င်​မှ ဒါ့ပုံနဲ့ ကွန်​မန်း​ပေးလို့ရတယ်​ ။ ပြီး​တော့ ဘ​ရောက်​ဇာ တစ်​ခုကို ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​အ​ကောင့်​တစ်​ခုထည့်​ဖွင့်​လို့ရတယ်​ ။ ​ကောင်​မ​လေး​တွေ လုပ်​ခိုင်းတဲ့ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​အ​ကောင့်​​တွေ ဒီဖုန်း​လေးနဲ့ လုပ်​​ပေး​နေတာ​ပေါ့ ။
သများဖုန်းက WCDMA အင်တာနက်အတော်အဆင်ပြေနေတယ်။ လိုင်းတွေကကောင်းဘူးရယ်။ ရွာထဲခက်ခက်ခဲခဲဝင်ရတယ်
ဆာဗာအပေါက်က… 1Gbs ဗျ…။
Backbone ပေါ်ထိုင်ထားတာ..။ အမြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ကြောင်း…။
နှေးတာကတော့.. ဆိုင်ရာယဉ်မောင်းသူများ.. တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း..။
သများရဲ့ ရွာအ ဝင် လမ်းကတော့ ဇော်ပိုင် ရဲ့ မြို့ အဝင် ညလိုပဲ သီချင်းလေး
ဆို wifi စီးပြီးငြိမ့်ငြိမ့် လေးလှမ်းဝင် လိုက် ရုံပဲ အာဟ
သဂျီးအခုလို ဂဇက်မြို့ကြီးအကြောင်း ဝင်ကြွားမယ်ဆိုတာ သိနေပြီးသားပါ။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကသူတွေ အဲလိုခက်တာတောင်မရမကဝင်ကြတဲ့ ရွာသံဃောဇဉ်လေးကို သိစေချင်လို့ပါဗျ
ကောင်းကပြာတော့ မနက်နိုးရင် မျက်လုံးမပွင့်ခင် ဖုန်းကိုအရင်စမ်းတယ်။ ၆ ဝန်းကျင်လောက်က လိုင်းရတယ်လေ။ ခုသုံးနေတာတောင် ၅နာရီ မခွဲသေးဘူး။ အဲ့လို ကြိုးစားတယ်။ မဟုတ် ဘယ်ဘက်ကအပြာချောင်း ညာဘက်ထိရောက်ဖို့ အတော်စောင့်ရတာ။ တခါတခါ သည်းခံတာတောင် ဒင်းက အဲ့နားက တက်မလာဘူး။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ပိုစ့် comment အသစ်ရောက်တာတော့မြင်ပြီး ဖွင့်မရလို့မးတော့လား MPT ကို မေတ္တာပို့မဆုံးးး
မနက်ဦးပိုင်းနဲ့ ညပိုင်းဆိုရင် အတော်မြန်သဗျ….
အနော့်အိမ်က ၅ ထပ်ဆိုတော့ လိုင်းပိုမိသလား မသိ
အိမ်သာနက် မကောင်တာကတော့ မထူးဆန်းတော့ပါဘူးလေ..
တစ်ခါ..တစ်ခါ တော်တော်ကောင်းမှသာ အံ့သြစရာ….
အိမ်မှာက လုံးဝ လိုင်းမရဘူး.. အိမ်မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး.. ရုံးဆင်းချိန်ဆို ဘယ်မှာမှ လိုင်းမရတာ..
ရုံးမှာကလည်း စက်တွေကို အင်တာနက်ပိတ်ထားတယ်..(public access တစ်လုံးပဲ ဖွင့်ထားတာ)..
နေ့လည်ဘက် ရုံးမှာပဲ ဖုန်းဖွင့်ပြီး ကလိလေသတည်းပေါ့….
အာ့ကြောင့် ရွာပြင်ကပဲ ပတ်ချောင်းနိုင်တယ်…
သဂျီးနှင့်နိုင်ငံခြားရောက် ဆရာ ဆရာမ များကတော့ ရွာ(မြို့) အ၀င်းလမ်းက သာယာပါဘိတဲ့လေ။
အင်း မြန်မာပြည်အကြောင်း မြန်မာပြည်နေ မြန်မာတွေ ပိုသိလေသတည်း ဟုသာဆိုရမယ်ထင့်။
ကွန်မန့်ပေးကြသူ ရွာသူားများကို ကျေးဇူးပါနော်။
ရွာထဲ ၀င်လို့ ရသယ်..ကွန်မန့်ပေးတာ ရပု..
spam ထဲရောက်နေသယ်..ဘာဖစ်လည်း မသိ
ကျွန်တော်တို့ လှိုင် မြို့နယ် ဘက်က
နက် ဆိုင်တွေ မှာတော့ အလွန်မြန်တယ်လို့ ပြောရမယ်ဗျ…။
အဲ…ဖုန်း နဲ့ကတော့ ၀င်ရခက်ပါတယ်…။
ဒါတောင် မနက် ၄ နာရီနဲ့ ၅ နာရီကြားလောက်ဆိုရင်…
ကွန်မန့်လေး အပေါ်ရောက်တွားပီ ..မြင်ရထှာ ၀မ်းသာထှာ …ေိခိ
ကျနော် ရွာဝင်တိုင်း နှေးတာပဲရှိတယ် ဝင်လို့ကတော့ ရနေတာပဲ
ခုနောက်ပိုင်း မအော်ရတာတောင် ကြာပေါ့
ရွာကတော့ အခြားဆိုက်ဒ်တွေထက်စာရင် ဝင်ရတာပိုနှေးပါတယ်။ ကျတော် သုံးနေကျတော့ အဲ့ဒါတော့ သိတယ်။